Raw Sustanon 250 poda - Vagadziri & Vanotengesa - Fekitori
Sustanon 250 imwe yezvinyorwa zvinoreruka zvaunogona kuwana muG labs. Zvisinei, zvinowanzoitikawo kuti ndeimwe yezvinodhura zvikuru. Sustanon 250 powder ndiyo iyo inonyanya kufarirwa ye testosterones inoshamisa. Inonyanya kushandiswa mu testosterone replacement therapy kuti iwedzere testosterone yemunhu kusvika kune utano hwakanaka. Nokuwedzera maitiro e testosterone varume vanokwanisa kunzwa vakananga uye vane utano zvakare.
Raw Sustanon 250 powder Tsanangudzo
Sustanon ndiro zita rekutengeserana kwemafuta-based injectable blends ye testosterone yakagadzirwa.
Raw Sustanon 250 powder isanganiswa yechina ma testosterone mairi:
Iyo nhamba mumazita inoreva kuti izvo zvinyorwa zve testosterone zvinokonzerwa mumusanganiswa mumwe nomumwe ndeZ250 uye 100 mg / ml, maererano.
Zvimwe testosterone esters zvakasiyana nehafu yeupenyu. Kushandiswa kwemamerasi e testosterone kunopa rubatsiro rwemastosterone hormone (asi asiri mutsara) rwakasununguka kubva mujisi rejena muropa remuropa.
Kunyange zvazvo chinangwa chevhisi yakavhenganiswa ne testosterone esters muSustanon ndechokupa mazamu akawedzera akaoma se testosterone, imwe testersterone yakareba-ester, yakadai se testosterone cypionate kana testosterone enanthate, inogona kupa zvakanyanya kuwedzera serum testosterone mazinga.
Sustanon ndiyo nzira inoshandiswa yekupupurirwa kwe testosterone muUnited States.
Ichi chimiro che testosterone isarudzo yakakurumbira yevanabolic steroid pakati pevarimi vemapurisa nevatambi.
Kemikari Name Sustanon 250 powder
muchiso Name Sustanon / Sustanon 250 powder
Kirasi yeMishonga /
Molecular Wsere /
Kunyorera Point 33-40 ° C
Biological Half-Life 7-9 mazuva
ruvara White crystal powder
chengetedzo Temperature Refrigerator
APane Sustanon inoshandiswa kurapa kuponeswa kwe testosterone muvarume.
Chii chakasvibiswa Sustanon 250 powder?
Sustanon 250 imwe ye steroid iyo yakakurumbira zvikuru uye inoshandiswa zvikuru mumunda wemishonga pamwe nekugadzira muviri. Inowanzoshandiswa kurapa varume vane mazamu mashoma e testosterone kuvandudza utano hwevanhu. Testosterone kukurudzira kudzorerazve tsika uye hutano hwevarume. Chibereko chacho chinoshandiswawo zvikuru mumasangano ekuvaka muviri. Inonyanya kuzivikanwa nemigumisiro yayo yakawanda mukubatsira varimi vemuviri kuti vave nekutsanya nekukurumidza kwekutenderera kwemisungo.
Iyo Yakakura Sustanon 250 powder mabasa
Sustanon injection ine testosterone esters (testosterone propionate, phenylpropionate, isocaproate uye decanoate). Izvi ndezvinyorwa zvechirwere chemurume chinokonzerwa neshure che testosterone, chinobudiswa nemakumbo. Testosterone ndiyo hormone inokosha inokosha pakukura kwakanaka, kubudirira nekushanda kwezvikamu zvepabonde nevanhurume zvepabonde.
Testosterone inokosha pakubudisa mbeu, kushandiswa kwepabonde, kugadziriswa, uye kushanda kweprostate gland uye zvimwe zvivako zvekubereka. Iyo inoshandawo muganda, masimba, skeleton, itsvo, chiropa, bone marrow uye pakati pehutachiona hurongwa.
Maitiro e testosterone echisikigo anowira zvishoma nezvishoma uye anowira nokukurumidza achitevera kubviswa kwemapuleti (somuenzaniso mukurapa kenza kanomwe). Nhamba dzinogonawo kuwira nekuda kwehutachiona (hypogonadism kana eunuchoidism), kana zvirwere zveplandia gland (gland muuropi inodzora kubudisa mahomoni).
Kuderera kwe testosterone kunogona kukonzera zviratidzo zvakadai sokuderedza kuita zvepabonde motokari, erectile kusagadzikana (kusava nesimba), kusabereka, kuneta, kuora mwoyo uye kuora mwoyo kwemapfupa (osteoporosis).
Kudzosera testosterone kunobvumira kuti testosterone yemasikirwo adzoke kudzokera kune yakasununguka uye inoderedza zviratidzo zvekushayikwa.
Kana iyi ndiyo nguva yokutanga yaunoshandisa Sustanon 250, zvino imwe jekisi kaviri pavhiki inofanira kunge yakakwana. 500mg / vhiki ndiyo yakanaka yekutanga yeTesttosterone uye imwe inogona kushivirirwa zvakanaka.
Chimwe chiitiko chinowanzoitika kwemavhiki e8-12 zvichienderana nezvinangwa zvemunhu.
Zvisinei, vashandisi venguva yakawanda vangashandisa kusvika ku1000 mg / vhiki kana kupfuura. Pamatokisi ayo akakwirira, njodzi yemigumisiro inowanikwa zvakanyanya zvikuru.
Sustanon 250 inogona kuiswa pamwe chete neimwe steroid chero ipi zvayo.
Raw Sustanon 250 powder tizvishandise
Sustanon 250 inoshandiswa nevarume vakuru vemu testosterone panzvimbo yekurapa matambudziko akasiyana-siyana ehutano anokonzerwa nekushaikwa kwe testosterone (murume ane hypogonadism). Izvi zvinofanira kusimbiswa nemaviri maviri ega ega testosterone zviyero uye zvinosanganisira zviratidzo zvemakiriniki zvakadai sekusava nesimba, kusabereka, kuparara kwepabonde, kuneta, kuora mwoyo uye kupera kwefupa kunokonzerwa nemazinga ehomoni.
Sustanon 250 inogonawo kushandiswa sechirwere chinotsigira zvevakadzi-kana-varume vanodanana.
Tenga Sustanon 250 powder kubva kuBuasas.com